यस्ता छन् रुँदाका फाइदाहरु, जान्नुहोस् के के हुन् ? – osnepal tv
काठमाडौं । तपाई कतिको रुनुहुन्छ ? एउटा मानिसले आफ्नो जीवनकालमा १६.५ ग्यालोन आँसु झार्ने कुरा एक अनुसन्धानले बताएको छ । धेरै खुशी हुदा र धेरै दुखी हुदा छिट्टै आँसु झर्ने गर्दछ । कुनै पनि नराम्रो घट्ना घट्ेको छ भने सबैभन्दा पहिला आँसुनै झर्ने गर्दछ ।
रुदा मानिसकोे शरीरबाट एक किसिमको हर्माेन बगेर जाने गर्दछ । यदि कसैले अभिनय गरेर वा प्याजको सहाउताले रुने प्रयास गर्छ भने आवश्यक हर्मोन बगेर े जादैन् । भावनामा डुबेर रुनु र ख्यालख्यालमा रुनुमा निकै फरक भएको कुरा वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । रुनु शरीरको लागी निकै महत्वपूर्ण भएको कारणले गर्दा जति सक्दो भावनामा डुबेर रोएको राम्रो हो ।
वैज्ञानिकका अनुसार भावनामा बगेर रुने समय भनेको बेलुका सात देखि १० बजेसम्म हो । यतिबेला मानिसहरु आफूलाई मनपर्ने मानिसको साथमा हुन्छन् । यतिबेला रोएको आँसुमा एक महत्वपूर्ण हर्मोन बगेर जाने कारणले गर्दा यदि तपाईको सम्बन्ध टुटेको र जीवनको निकै कठिन अवस्थामा हुनुहुन्छ भने त्यसलाई बाहिर निस्कन दिनुहोस् । मन खोलेर रो्एको खण्डमा दिमाख समेत शान्त हुने गर्दछ । जसले गर्दा तपाईको दिमागले राम्रो कुराहरु मात्रै सोच्ने गर्दछ ।
Previous article नाकबाट पानी पिएर आँखा बाट पानीको धारा निकाल्न सक्छन् यि ब्यक्तिले, हेर्नुहोस् भिडियो
Next article नराम्रा घटना घट्नु अगाडी देखा पर्छन् यस्ता संकेत, जान्नुहोस् रहस्य
नराम्रा घटना घट्नु अगाडी देखा पर्छन् यस्ता संकेत, जान्नुहोस् रहस्य